မန်းရွှေစက်တော် ရောက်ခဲ့စဉ်တခဏ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မန်းရွှေစက်တော် ရောက်ခဲ့စဉ်တခဏ
Posted by မောင်ရိုး on Mar 25, 2017 in Creative Writing, Local Guides, Travel |9comments
မန်းစက်တော်ရာဘုရားပွဲကို ရီဗျူးရေးမယ်လို့ ကြံရွယ်ခဲ့ပေမယ့် ပွဲတော်ရက်သာကုန်တော့မယ် အခုထိမရေးနိုင်သေး . . . ။
အခုတော့ ရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲရဲ့အပြောင်းအလဲလေးတွေကိုကြည့်ရင်း ရေးချင်လာမိပါတယ် ။
တကယ်တော့ မန်းစက်တော်ရာဆိုတာ အခုချိန်မှ ထင်ရှားတာမှမဟုတ်ဘဲလေ ။အင်းဝခေတ်စာဆိုတော်ကြီးရှင်မဟာရဋ္ဌသာရနုစဉ်ကတည်းက “ရွှေစက်တော်သွား တောလား ” ရယ်လို့ စာတစ်ဆောင်ပေဖွဲ့နဲ့ ခေတ်ကြေးမုံကိုပြခဲ့သေးတာမဟုတ်လား . .
“. . . တောကြက်တွန်မြူး၊ ကျေးငှက်ကျူး၍၊ သံကြူးမြည်စည်၊ စက်ရိပ်လည်၍၊ နေခြည်ဝင်မြောက်၊ ဆည်းဆာရောက်သော်၊ မျောက်ကကြိုးခွေ၊ ဒေါင်းအိုးဝေနှင့်၊ သံခြေကြွေးကြော်၊ ဖို-မခေါ်လျက် . . . ”
အခုလည်း ကျေးငှက်သာရကာသံတွေဆိတ်သုန်းနေပေမယ့် . . .
စိမ်းစိုမှိုင်းညို့နေတဲ့ သစ်ပင်တောတန်းတွေမရှိတော့ပေမယ့် . . .
အေးမြတဲ့မန်းချောင်းရေကတော့ စီးဆင်မြဲစီးဆင်းနေလျှက်ပါလေ . . .
ရွှေစက်တော်လို့ပြောလိုက်ရင်ပဲ စက်တော်ရာနှစ်ဆူကိုဦးခိုက်ဖူးမျှော်ရင်း စိမ်းကြည်နေတဲ့ မန်းချောင်းရေတွေရယ် ၊ ခြေရာမဲ့စွာပျံသန်းလာတဲ့ လေနုအေးတွေရယ် ပြီးတော့ မြေလတ်ဒေသရဲ့ အလွန်ကြီးကျယ်ခန်းနားတဲ့ သဘာဝပွဲဈေးတန်းတွေက စိတ်ဝိညာဉ်ကို ညှို့ယူနိုင်စမြဲမဟုတ်ပါလား . . .
ဒီလိုနဲ့ဘဲ မန်းရွှေစက်တော်ခရီးစဉ်လေးကို ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် . . .
နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သောတပို့တွဲလဆန်း ၅ ရက်မှ မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့အထိ ရက်ပေါင်း (၈၀)ကျော် ကျင်းပသည်ဖြစ်၍ အချိန်တိုတောင်းသော်လည်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပို၍ပင်စည်ကားလှသည် ။ ရာသီဥတုနှင့်နေရာဒေသအခြေအနေအရဒီအချိန်လေးအတွင်းသာကျင်းပရသည်မို့ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှဘုရားဖူးလာသူများ စုံလင်လှပေသည်။ ကိုယ်ပိုင်ကားများနှင့်တမျိုး ၊ ဘုရားဖူးလိုင်းကားများနှင့်တသွယ်စုဝေးရောက်လာကြသည်မို့ ရုံးပိတ်ရက်နှင့် စနေ၊တနင်္ဂနွေနေ့များဆိုလျှင် မန်းချောင်းနံဘေးမှ တဲတန်းကြီးများတွင် နေရာမရတတ် …။အလုအယက်နေရာယူရ အခန်းရှာကြရတော့သည်။
ရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲ၏မြင်ကွင်းသည်ကား တော်တော်များများပြောင်းလဲနေပေပြီ ။သန့်ရှင်းသောရေလောင်းအိမ်သာများနှင့်လျှပ်စစ်မီးလည်းထိန်ထိန်ငြီးနေပါပြီ ။အထက်စက်တော်ရာသို့ တောင်တက်ကားများနှင့်လည်း သွားလို့ရနေပြီဖြစ်သည် ။
တချိန်က သုနာပရ န္တ တိုင်းအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သောဤဒေသသည် ဘုရားပွဲတော်ချိန်ရောက်တိုင်းအထူးစည်ကားလှသည်။ “ရွှေစက်တော်အစ ၊ ကျောင်းတော်ရာက ၊ကျောင်းတော်ရာအစ မဟာပုဏ်ဏက “ဟုစာဆိုရှိသည့်အတိုင်း …ရွှေစက်တော်ဘုရားဖူးရင်း သမိုင်းအရဆက်စပ်နေသော မကွေးမြသလွန်စေတီ ၊ မင်းဘူးစက္ကိန်းတဲစေတီ ၊နဂါးပွက်တောင်နှင့်လယ်ကိုင်းမြို့အနီး ၀ါဏိဇ္ဖဂါမရွာစန္ဒကူးကျောင်းတော်ရာသို့သွားရောက်ဖူးမြော်နိုင်ပါသည် ။
တောရိပ် တောင်ခွင်နှင့်ခွေခေါက်၍စီးဆင်းနေသောလွမ်းမောဖွယ် မန်းချောင်းသည်ဘုရားပွဲတော်အားတစ်နည်းတဖုံအရောင်တင်ပေးလျှက် ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ရှိချေတော့သည်။
**ကြည်ညိုဖူးမျှော် မန်းစက်တော်သို့ **
ခါနွေဆန်းကာစ လွမ်းငွေ့ဝေဝေ မြူတွေဆိုင်းသော မတ်လ၏အစပိုင်းတစ်ရက်တွင် ကျနော်တို့အဖွဲ့မန်းရွှေစက်တော်ခရီးစဉ်စတင်ခဲ့ပါတော့သည် ။
သီးသီးသန့်သန့်သွားလိုသဖြင့် ကားအငှါးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ စင်းလုံးငှါးမော်တော်ယဉ်တစ်စီးငှါးရမ်းခဲ့သည် ။
ကျနော်အပါအဝင် ခုနှစ်ယောက်သာလိုက်ပါမည်ဖြစ်သော်လည်း ချောင်ချိသက်သာစေရန် ၁၄ ယောက်စီး တစ်စီးငှါးလိုက်သည် ။
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်များအတွက်လည်း အညာလက်ဆောင်လေးများ ဝယ်ရဦးမည်ဆိုတော့ အပြန်တွင်ကားသိပ်ချောင်လှမည်မထင်ပေ။
ရန်ကုန်မှစတင်ထွက်ခွါချိန်သည် ည (၁၀)နာရီ ။
ယခင်ရောက်ခဲ့ဖူးသော ပုသိမ် မုံရွာလမ်းမှ သွားမည်ထင်ခဲ့သော်လည်း ထောက်ကျန့်လမ်းဆုံကိုတည့်တည့်ဖြတ်၍ အမြန်လမ်းဆီသို့ဦးတည်လိုက်သဖြင့် ဒရိုင်ဘာအစ်ကိုကြီးကို တအံ့တသြမေးကြည့်မိသည် ။
သြော် . . . ရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲသည်သာမက ခရီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေပါပြောင်းလဲနေပြီပဲ ။
ရွှေစက်တော်သို့ရန်ကုန်မှသွားမည်ဆိုလျှင် ဦးစွာပထမ အမြန်လမ်းမိုင်တိုင် ၂၂၀ သို့အရင်သွားရမည်ဖြစ်သည် ။
ထိုနေရာမှ အနောက်ဘက်သို့လမ်းခွဲအတိုင်းဆင်းလေသော် လမ်းနှစ်သွယ်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည် ။
ပထမလမ်းကြောင်းကား နေပြည်တော် – တောင်တွင်းကြီးလမ်းဖြစ်ပြီး ဒုတိယလမ်းသည်ကား နေပြည်တော် – ကန်ပြားလမ်းဖြစ်လေသည် ။
ကျနော်တို့ရွေးချယ်သောလမ်းသည် နေပြည်တော်ကန်ပြားလမ်းဖြစ်ပြီး ထိုနေရာမှ ၇၉ မိုင်ခန့် ကွာဝေးလေသည် ။
ပဲခူးရိုးမ၏ တောင်စွယ်ကုန်းတန်းများကိုကျော်ဖြတ်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် အတွေ့အကြုံရှိသော ယဉ်မောင်းများဆိုပါကအခက်အခဲရှိမည်မဟုတ်ပေ ။
တောင်ပေါ်လမ်း အဖြစ် မိုင်၃၀ကျော်ခန့်စီးနင်းရမည်ဖြစ်သဖြင့် မူးတတ်သူများဖြစ်ပါက ကြိုတင်၍ ကာကွယ်ထားသင့်သည် ။
ကျနော်တို့အဖွဲ့ကတော့ ရိုလာကိုစတာစီးနေရသလိုပျော်ရွှင်နေသဖြင့် တောင်ပေါ်လမ်းအား တိုတောင်းလှသည်ဟုပင် ထင်မိနေပြန်သေးသည် ။ယခင်က ထိုလမ်းသည် အတန်ငယ်ကျဉ်းမြောင်းသည်ဟုသိရသည် ။ယနေ့တွင်မူ . . ကားနှစ်စီး လွတ်လပ်စွာရှောင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ထို ၇၉ မိုင်ခရီးအား လမ်းရှင်းပါက နှစ်နာရီခန့်သာမောင်းရသည် ။
လမ်းတလျောက်တွင်တော့ သစ်ငုတ်တိုများသစ်ခြောက်ပင်များနှင့် တန်ဆာဆင်အပ်သော တောင်ကတုံးများကိုတွေ့မြင်ရပေမည်။
ကန်ပြားရွာကိုရောက်တော့ မကွေးမြို့သို့ (၇ )မိုင် ဆက်မောင်းရပြန်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကြဇုဖန်ခါးသီးတို့၏ ဇာတိမြေဖြစ်သော မကွေးမြို့တော်သို့ နံနက် (၆) နာရီခန့်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ပါတော့သည် ။
ဖန်ခါးမြို့တော်မကွေးမြို့၏ နံနက်ခင်းသည် ခတ်စိမ့်စိမ့်လေး အေးနေသေးသည် ။မြသလွန်စေတီပေါ်မှ မြင်ရသောဧရာဝတီသည် မြူနှင်းများဝေလျှက် တိတ်ဆိပ်ငြိမ်သက်နေလေသည် ။
ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကိုကြိတ်မှိတ်ခံရင်း သူမ၏ရင်နှစ်မွှာကို ခွဲရက်လေသော အလယ်ကျွန်း များကိုမချိတင်ကဲကြည့်ရင်း အားတင်းထားနေသယောင် . . . ။
ယခင်က မင်းဘူးသို့ဇက်ဖြင့် ကူးရသည် ။ယခုသော် . . တံတားကြီးဖြင့် သက်တောင့်သက်သာ ကူးနိုင်ပြီဖြစ်သည် ။
မင်းဘူးရောက်တော့ ရှင်ပင်စက္ကိန်းတဲစေတီနှင့် နဂါးပွက်တောင်သိူ့ ဝင်ရောက်ဖူးမျှော်ကြပြန်သည် ။
ပြီးမှ ရွှေစက်တော်သို့ ခရီးဆက်ကြသည် ။
ရွှေစက်တော်သို့ ဝင်ရောက်ရာလမ်းကြောင်းမှာ သုံးခုရှိလေသည် ။
ယခင်ကာလများက ပုသိမ် မုံရွာလမ်းကလာသောအခါ ပဒါန်းလမ်းဆုံသို့ရောက်သည် ။
ထိုမှတဆင့် ၈ မိုင်လမ်းခွဲမှ ဝင်လေ့ရှိသည် ။
ထိုလမ်းကြောင်းသည် အဆင်အတက်များပြီး မော်တော်ယဉ်များမတော်တဆအဖြစ်များကြသည် ။ထိုလမ်းကိုယခုချိန်တွင် အသုံးပြုသူအလွန်နဲသွားပြီဖြစ်လေသည် ။
ဒုတိယလမ်းကြောင်းမှာ ပုသိမ်မုံရွာလမ်းကြောင်းမှတဆင့် ငဖဲမြို့သို့သွားရသည် ။ငဖဲ မှ ရွှေစက်တော်သို့ ပုံမှန်သုံးလေ့ရှိသော ရွာလမ်းရှိလေသည် ။
သို့သော် ဒေသခံများမှလွဲ၍ဘုရားဖူး ဧည့်သည်များ အသုံးနဲလှသည် ။
တတိယလမ်းကြောင်းသည်ကား မင်းဘူး – အမ်းလမ်း အတိုင်းလာ၍ မိုင် ၂၀ ကျော်ခန့်တွင် ပုသိမ်မုံရွာလမ်းသို့ဖြတ်ဖေါက်ထားသော ၁၁ မိုင်လမ်းခွဲကိုတွေ့ရပေလိမ့်မည် ။
ထိုမှတဆင့် ပုသိမ် မုံရွာလမ်းကိုကူး၍ ၃ မိုင်လမ်းခွဲဖြင့် မန်းစက်တော်ရာသို့ ဝင်ရောက်ရပါမည် ။
ထိုလမ်းသည် ယခင် ၁၀ စုနှစ် နှစ်ခုခန့်က တောလမ်းသာသာ အဖြစ်သာရှိပြီး ကားကြီးများ သွား၍မရနိုင်ပေ။
ယနေ့တွင်မူ ကတ္တရာခင်းလမ်းမကြီးအဖြစ် ခန့်ခန့်ထည်ထည်ဖြစ်နေပေတော့သည် ။
ကျနော်တို့အပါအဝင် ဘုရားဖူးကားအများစုသည် ၁၁ မိုင်လမ်းခွဲမှ ရွှေစက်တော်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတော့သည်။
** မန်းချောင်းရင်ခွင်ဆီသို့ **
ရွှေစက်တော်ဘေးမဲ့တောကိုဖြတ်၍ ၃ မိုင်လမ်းခွဲမှဝင်လိုက်သည်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေမိသည် ။
စက်တော်ရာနှစ်ဆူကိုဖူးမျှော်ကြည်ညိုရင်း မန်းချောင်းရဲ့အထိအတွေ့ကိုခံစားရတော့မည်ဖြစ်၍ ရွှင်ပျကြည်နူးနေပြန်သည် ။
စက်တော်ရာ တဲကျောင်းတွေကိုတွေ့လိုက်သည်နှင့် ထပ်မံအံ့သြရပြန်သည် ။
ယခင်ကထက် ၄ ဆခန့်ပိုလာသော တဲကျောင်း (ဝါး/ဓနိတို့ဖြင့်ဆောက်ထားသောတဲငယ်)များနှင့်တကွ ယမန်နှစ်က ကြားဖူးထားသောဈေး၏သုံးပုံတစ်ပုံခန့်သာပေးရသောအခန်းငှါးခများကိုကြည့်ရင်း ကျနော်ပါးစပ်အယောင်းသားဖြင့် ငေးနေမိပြန်သည် ။
အညာစာလွှာ အညာစာလေးများကိုရောင်းချနေသောဈေးသည်လေးများထံမှလည်း ဝယ်ယူအားပေးရပေဦးမည် ။
မျှစ်ခြောက်၊ ထန်းလျှက် ၊ ပေါက်ပေါက်ထန်းလျှက် ၊ မကျီးတော်ဖီ ၊ မုန့်လေပွေ ၊ ကြက်ဥမြေပဲ ၊ စသည် စသည်များးးး . . . ။
ပထမဦးစွာ တဲကျောင်းနှစ်ဆောင်ငှါးလိုက်သည် ။
ပြီးနောက် အောက်စက်တော်ရာသို့ ဝင်ရောက်ဖူးမျှော်ဦးတိုက်ပြန်သည် ။
ကာဗွန်နံ့ကင်းလေသော လေနုအေးကိုတဝကြီးရှူရှိုက်ရင်း အထက်စက်တော်ရာသို့ တောင်တက်ကားများဖြင့် တက်ရောက်ဖူးမျှော်ပြီး ရွှေစက်တော်တဲကျောင်းများနှင့် မန်းချောင်းကို အပေါ်စည်းမှကြည့်နေမိသည် ။
ချောင်းထဲတွင်တော့ ရွှေပွဲလာများရေစိမ်နေကြလေပြီ ။
အထက်စက်တော်ရာမှပြန်ဆင်းလျှင်တော့ မန်းချောင်းရေမှာစိမ်ရင်း ဘဝအမောတွေဖြေပါဦးမည် ။
ကြည်စိမ်းနေသော ချောင်းရေပြင်တွင်ကူးခတ်နေသည့် ငါးကလေးများကိုလည်း ရေတွက်ပါဦးမည် ။
ချောင်းရေပြင်အောက်ခြေမှ ကျောက်စရစ်ဖြူဖြူလေးများကိုလည်း အိမ်အပြန်လက်ဆောင်အဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည် ။
တွေးရင်း . . တွေးရင်း. . . . ပြန်အဆင်းတွင် ကျနော်ခြေလှမ်းများ သွက်လက်နေမည်ဟု ဆိုပါလျှင် . . . . . ။
ရွှေစက်တော်ကို အခုထိ မရောက်ဖူးသေး။ ပုသိမ်ကနေ- ဥသျှစ်ပင် (ပြည်မြို့တောင် ဝင်လိုက်သေး)-မင်းဘူး-မကွေး ထိ… ပုသိမ် – မုံရွာလမ်းအတိုင်း ပဒါန်းတို့ ဘာတို့ကို ကျော်ပြီး မောင်းဖူးတယ်။ ပုသိမ်- မုံရွာလမ်း…လုံးဝ မကောင်း။ ကျဉ်းလည်းကျဉ်း… ဆိုးလည်းဆိုး။
မကွေးကို နေပြည်တော်- တောင်တွင်းကြီး လမ်းကနေလည်း သွားဖူး။ နေပြည်တော်- ကန်ပြားလမ်းကနေလည်း သွားဖူးတော့ အဲဒီလမ်းအကြောင်း ဖတ်ရတာ… သွားဖူးတဲ့အချိန်လေးကို ပြန်အမှတ်ရပြီး လမ်းဘေး မြင်ကွင်းတွေ စိတ်ထဲ ပေါ်လာတယ်။
မကွေးမှာ မြသလွန် မဝင်ခဲ့ဘူးလား။
ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းဘေးက ငွေသောင်ယံကမ်းရဲ့အစပ်မှာ ရှိတဲ့ မြသလွန်က
မင်းဘူးဘက် ကူးတဲ့ တံတားကြီးနဲ့ သိပ်မဝေးဘူးနော်။
မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာတွေအကြောင်း ဖတ်ရရင် ခြေထောက်တွေက ဗိုက်ဆာလာတယ်
ပို့စ်နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်။ မျှစ်ကြော်စိတ်ထဲမှာ အဲလောက်ကြီးတဲ့ ခြေတော်ရာတို့ စွယ်တော်တို့ဆိုတာ အမြဲစိတ်တွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်တယ်။
တိုင်းပြည်တိုးတက်လာရင်တော့.. ချောင်းဘေးတလျှောက်မှာတဲလေးတွေဆောက်သလို.. ဈေးရောင်းသလိုကို.. ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်လို့ မထင်ဘူး..။
သီဟိုကျွန်းမှာ အဲလိုခြေတော်ရာဆိုပြီး အဖုံးအုပ်ထား..။ တခါလှပ်ကြည့် ဒေါ်လာဘယ်လောက်ဆိုပြီး… ငွေရှာအလှူခံတာမျိုးလုပ်တယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်..။
အဲလိုကောက်လုပ်လိုက်ရင်.. ဒေါ်လာသိန်းချီထွက်လာမယ်..။ အဲဒီငွေကို.. မတည်ပြီး.. တောကြီးပြန်ဖြစ်လာအောင်.. အနည်းဆုံးဒေါင်း၊မျောက်၊သမင်လောက်တော့… မွေးသင့်.. ဘေးမဲ့တောလုပ်ထားသင့်..။
ကောင်းပါတယ် တကယ်ကိုရောက်သွားတဲ့အတိုင်းပါပဲ..ကားမောင်းတဲ့သူဆိုတော့..ကားလမ်းအကြောင်းတွေပြောထား တာလည်း မိုက်ပါတယ်
ကေတီဗီ မာဆတ် နိုက်ကလပ် လစ်ရင်လစ်သလိုသွားတာကြတော့ မရေးရဲ ဘူး မလား
ဟိုတခါ ကွမ်းငုံရင်း ဇာတ်လမ်းဖစ်တာ မန်းစက်တော်မှာပဲ မဟုလား ငင်??
ေ/ွှစက်တော်ကတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် နှစ်စဉ် သွားရောက်ဖူးမြော်ချင်ပါတယ်။
ခုတော့ မရောက်ဖြစ်တာ သုံး လေးနှစ်မကတော့ဘူး။ မန်းချောင်းလေးလည်းသတိရတယ်။